Malunga nathi - Weifang Zhicheng Machinery Co., Ltd.
Oomatshini Co, Ltd.
Weifang Zhicheng oomatshini Co., Ltd.
Weifang Zhicheng oomatshini Co., Ltd. ibekwe kwikomkhulu elihle ikite-Weifang City, Shandong kwiPhondo. Efumaneka Junbukou Industrial Park, kunye nokuthuthwa Kulula kakhulu.
Yasekwa ngonyaka ka-2009. Inkampani unamandla zobugcisa olomeleleyo kunye nobuchwepheshe izixhobo phambili, ikakhulu ukuvelisa iitrektara mini, ukuhamba itrektara, tiller rotary, umatshini ditching, umatshini yokulima nzulu, umatshini umngxuma umva umva umatshini, ezinye iimveliso zezolimo.
Sisoloko sibambelela kumgaqo "umgangatho wokuqala, umthengi kuqala", ngesimo sengqondo esinzulu nesingqongqo, ukuba nguvulindlela kunye nokuyila, kunye nokuqhubela phambili ngokuqhubekayo. Ukuphucula inkonzo yasemva kokuthengisa kunye nokomeleza iqela lenkonzo, ukuze sikwazi ukufikelela ngexesha elifanelekileyo nangokufanelekileyo kubathengi abatsha nabadala ukubonelela ngeemveliso ezingcono kunye neenkonzo ezingcono.
Intsebenziswano ngokunyanisekileyo kunye noosomashishini basekhaya nabangaphandle, isandla phambili ngesandla, ukudala okuqaqambileyo.
Umenzi wobungcali kunye neNkokeli yoomatshini bezoLimo
Kukho iiseti ezingaphezu kwe-10 zemveliso eziphambili kunye novavanyo lwezixhobo eziqinisekisa umgangatho wemveliso, Sikwanazo neqela lobuchwephesha ekuyileni nasekuveliseni ezinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kumthengi, yiyo loo nto sinokuxhasa umgca wemveliso ye-OEM. intengiso kunye nenkxaso yangemva -sales, ukuqinisekisa unxibelelwano lwexesha phakathi kwabaxumi kunye nathi Ngaphandle koko. Kwaye sisekele ubudlelwane obuhle kakhulu noMzantsi Melika, iYurophu, iAsia, kunye namazwe aseAfrika .Siphuhlisa ubuncinci iintlobo ezi-2 zeemveliso ezintsha minyaka le ukuhlangabezana neemarike zehlabathi.Iqela lethu linamava atyebileyo kunye nobungcali ekuqhubeni ishishini lamanye amazwe. Efektri yethu ibekwe kwisiXeko saseWeifang, kwiPhondo leShandong, kwi-180km ukusuka kwizibuko laseQingdao, ngaxeshanye kukho isikhululo seenqwelomoya i-Weifang kufutshane nomzi-mveliso wethu, ke, kulunge kakhulu ukuba abathengi batyelele, bajonge phambili kwintsebenziswano nawe!